ယူရို ၁၀၀ အောက်အတွက်စမတ်ဖုန်းများ Gadget သတင်း
တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်လုပ်နေပြီးနောက် ဒီ ၂၀၁၅ အတွင်းဈေးကွက်ထဲကိုအလင်းရောင်မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးတရုတ်စမတ်ဖုန်း ၇ ခုဒီကနေ့မင်းကိုကမ်းလှမ်းချင်တယ် ကျွန်ုပ်တို့ယူရို ၁၀၀ အောက်အတွက် ၀ ယ်ယူနိုင်သောလက်ကိုင်ဖုန်းစာရင်း။ ၎င်းသည်ငွေအတော်အတန်နည်းပါးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသော်လည်းထိုစျေးနှုန်းအတွက်အရာရာတိုင်းနှင့်ပင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဆိပ်ကမ်းများထက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုရှာတွေ့နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီစာရင်းကိုမစတင်မီမှာသင်ဟာထူးခြားတဲ့အင်္ဂါရပ်တွေရှိတဲ့စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုရှာဖွေနေတယ်၊ ​​ဒါမှမဟုတ်အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်ကူးနိုင်ရင်မှားယွင်းတဲ့နေရာကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုငါတို့ပြောရမယ်။ ဒီနေရာမှာငါတို့တွေ့မြင်ရမယ့်ဒီ terminal တွေဟာမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းလျှောက်လွှာမှတဆင့်ရံဖန်ရံခါမက်ဆေ့ခ်ျကိုမကြာခဏဖုန်းခေါ်ခြင်းနှင့်ပေးပို့ခြင်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်နေစဉ်စိတ်ကူးတစ်ခုသည် terminal တစ်ခုထဲတွင်ယူရို ၁၀၀ အောက်သာသုံးစွဲရန်ဖြစ်သည်ကိုအမြဲတမ်းသတိရပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးနိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘဲ ပို၍ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင့်မှာပိုက်ဆံနည်းနည်းလေးရှိရင်၊ ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ချင်တဲ့အချိန်နောက်ကျပြီးမှစမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ၀ ယ်ချင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်စမတ်ဖုန်းကနေဘာမှမတောင်းဘူး၊ ဒီမော်ဒယ်တွေထဲကတစ်ခုကမင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ကသင့်ကိုသတင်းအချက်အလက်များစွာပေးလိမ့်မည်။ သင်မည်သည့် terminal ကို ၀ ယ်ယူရမည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ရမည့်သူဖြစ်သည်။
1 Energy Sistem ဖုန်းအရောင်များ
2 Huawei က Y530
4 Motorola Moto E (ပထမမျိုးဆက်)
5 BQ Aquaris ၅
Energy Sistem ဖုန်းအရောင်များ
ဒီစျေးနှုန်းက ၅၉ ယူရိုသာပါ Energy Sistem ဖုန်းအရောင်များ၎င်းသည် ၄ ​​လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်စွမ်းဆောင်ချက်များနှင့်အထူးကောင်းမွန်မှုများကိုပေးစွမ်းနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းအလွန်အမင်းမလိုအပ်သောသုံးစွဲသူများအတွက်လုံလောက်ပေလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယလိုင်းအတွက်ဤမိုဘိုင်းကိရိယာရှိသည်။ ၎င်းသည်နေရာမယူဘဲဘောင်းဘီအိတ်ထဲသယ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူကအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တယ်၊ Android 4.4 operating system ရှိတယ်။ KitKat နှင့်စျေးနှုန်းများအရမည်သည့်အရာကိုမဆိုတောင်းခံရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ပရိုဆက်ဆာ: dual-core ARM Cortex A7 1GHz
အချက်အလက်များပြမျက်နှာပြင် - ၄.၀ လက်မ TFT-LCD (WVGA - 4.0 × 800 pixels)
ဘက်ထရီ: 1450 mAh
သိုလှောင်မှု - microSD-HC / XC ကဒ်များကို အသုံးပြု၍ ၆၄ ဂရမ်အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်
ကင်မရာ - 5MP အနောက်ဘက်တွင် auto-focus နှင့် LED flash တို့ပါဝင်သည်
ဒီဟာကိုသင်ဝယ်နိုင်သည် Energy Sistem ဖုန်းအရောင်များ ဒီမှာ
Huawei က Y530
Huawei သည်လူသိအများဆုံးတရုတ်ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးမကြာသေးမီအချိန်များကမည်သို့ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိနေသည်။ စျေးကွက်ရှိအမျိုးမျိုးသောအရည်အသွေးမြင့်ဆိပ်ကမ်းများဖြင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအသုံးပြုသူအမြောက်အများကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့သည်
Este Huawei က Y530 ၎င်းသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပြီးငွေကြေးအနည်းငယ်သာကျွန်ုပ်တို့တွင်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောမိုဘိုင်းစက်တစ်ခုရှိနိုင်သည်။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏အဓိကလက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုချက်ချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။
Processor: 200GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် Snapdragon 1,2
မျက်နှာပြင် - ၄.၅ လက်မ IPS နှင့် resolution 4,5 x 480 pixels
ဘက်ထရီ: 1750 mAh
သိုလှောင်မှု - microSD မှ ၃၂ GB အထိသိုလှောင်မှုပမာဏ - 4GB
ကင်မရာ - အနောက်ဘက်တွင် 5MP နှင့်ရှေ့ဖက်တွင် 0,3MP
နောက်ထပ်တစ်ခါ အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါသော terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့မရင်ဆိုင်ရပါ၊ သို့သော်မည်သည့်သုံးစွဲသူမဆိုတောင်းဆိုမှုများမလိုဘဲ၎င်းတို့အတွက်လုံလောက်ပါလိမ့်မည် သို့မဟုတ်သင်သင်၏စက်ကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း။
သင်ဤ Huawei Y530 ကို ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသိများပြီးအသိအမှတ်ပြုထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုမှ terminal တစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည် Sony Xperia E1 ကောင်းစွာ 100 ယူရိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းသည်။ များသောအားဖြင့်ဒီစျေးနှုန်း၏ devices များ၌ဖြစ်ပျက်အဖြစ် Resolution4× 800 Pixels ရှိတဲ့ ၄ လက်မမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ပါ.
RAM ကို: 512 MB ကို
မျက်နှာပြင် - ၄ လက်မ4x 800 pixel TFT မျက်နှာပြင်
သိုလှောင်မှု - microSD နှုန်း ၃၂ အထိအထိသိုလှောင်နိုင်မှု
ကင်မရာ - 3MP ရှိ autofocus နှင့် HDR
သင်ဤ Sony Xperia E1 ကို ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
Motorola Moto E (ပထမမျိုးဆက်)
Motorola က သူ၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအနက်သူသည်ဤစာရင်းတွင်မပါ ၀ င်နိုင်ပါ။ အမှန်မှာလှပပြီးလှပသောအပြင်၊ ယခု Lenovo ကပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ၏ဆိပ်ကမ်းများသည်လည်းများသောအားဖြင့်စျေးပေါကြသည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်ဒီ Moto E ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်စေ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေမည်သည့်စတိုးဆိုင်တွင်မဆိုပြproblemနာမရှိဘဲယူရို ၁၀၀ အောက်သာ ၀ ယ်နိုင်သည်။
ဤစာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သောအခြားဆိပ်ကမ်းများနှင့်မတူသည် ဒီ Moto E ဟာထူးခြားတဲ့သတ်မှတ်ချက်များနဲ့အတူ "ခေါင်းကိုက်ထားတယ်" ဒါခေါ် input ကိုအကွာအဝေးတစ်ခု terminal ကိုဖြစ်။
မျက်နှာပြင် ၄.၃ လက်မရှိပြီး resolution 4,3 x 540 pixels ရှိသည်
ဘက်ထရီ: 1980 mAh
သိုလှောင်မှု: microSD ဖြင့် 4GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သော 32GB
ကင်မရာ - နောက်ဘက် 5MP
Android: 4.4.4 KitKat နှင့် Android Lollipop 5.0 သို့အပ်ဒိတ်
သင်သည်ဤ Motorola Moto E (ပထမမျိုးဆက်) ကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဒီမှာ.
BQ Aquaris ၅
အများစုမှာဆိပ်ကမ်းကြောင်း စပိန်မူရင်း BQ ၏ကုမ္ပဏီ စျေးကွက်အပေါ်တစ် ဦး မျှမျှတတနိမ့်သောစျေးနှုန်းရှိခြင်း၏ဝါကြွားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်၊ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအလွန်ညံ့ဖျင်းသောသတ်မှတ်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဒီဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် Aquaris ၅ ကျွန်တော်တို့ဟာပိုက်ဆံနည်းနည်းလောက်ရနိုင်တယ်၊ မကြာသေးခင်အချိန်ကပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်တာကြောင့်စျေးကွက်ထဲမှာခဏတာရောက်ရှိနေပြီး ၀ ယ်ဖို့အတွက် ၀ ယ်ယူနိုင်တဲ့ 4G ဗားရှင်းကိုရှာဖို့လိုတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကိုရှာဖို့ကောင်းတယ်။ ဈေးကယူရို ၁၀၀ ထက်မကျော်ပါဘူး။
နောက်ကျနော်တို့အဓိကပြန်လည်သုံးသပ်သွားနေကြသည် ဒီ Aquaris4၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ.
ပရိုဆက်ဆာ: Cortex A9 Dual Core 1 GHz အထိ
မျက်နှာပြင် - ၄ လက်မ IPS resolution ဖြင့်4x 480 px ။ 800 HDPI
ဘက်ထရီ: 1500 mAh
သိုလှောင်မှု: 12GB (4GB Internal နှင့် 8 အတွက် microSD Class 10)
ကင်မရာ - နောက်ဘက် 5MP နှင့် VGA ရှေ့
ဒီစာရင်းထဲမှာသင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ် Doogee DG580 အားလုံး၏အကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းနှင့်စွမ်းအားအရှိဆုံးအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိခြင်း။ ယူရို ၁၀၀ ထက်နည်းသောကြောင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲဒီ terminal မှာကျွန်တော်တို့ဟာတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်နည်းနည်းနဲ့မ ၀ ယ်နိုင်ဘူး။ တရုတ်စတိုးတွေကနေတစ်ဆင့်ဒါကိုလုပ်ရလိမ့်မယ်၊ အဲဒါကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးစေပြီးတစ်ခါတစ်လေနောက်ဆုံးဈေးကိုတက်စေတယ်။
အ ဒီ Doogee DG580 ၏အဓိကသတ်မှတ်ချက်များ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
ပရိုဆက်ဆာ: 6582GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် Mediatek MTK1.3
မျက်နှာပြင် - ၅.၅ လက်မ qHD
ဘက်ထရီ: 2500 mAh
သိုလှောင်မှု - microSD ကဒ်ဖြင့် 8GB တိုးချဲ့နိုင်သည်
ကင်မရာ - အနောက်ဘက်နှင့် 8 megapixel ကင်မရာ
သင်ဤ Doogee DG580 ကို ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
၎င်းသည်စာရင်းတွင်လူသိအနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းမှာ Cubot S168 ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအချက်များကြောင့်သင်၏ခေါင်းကိုဆွဲထုတ်နိုင်သည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ထဲတွင်ရှိသောအခြားဆိပ်ကမ်းများရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့်မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်း၎င်း၏စျေးနှုန်းများကိုများစွာလျှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ယူရို ၁၀၀ အောက်အောက်တွင်ကြီးမားသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
Processor ကို: MTK6572A
မျက်နှာပြင် - Resolution5x 960 ရှိသည့် ၅ လက်မအရွယ်
ဘက်ထရီ: 1900 mAh
ကင်မရာ - LED flash ပါသည့် 8 megapixels
ကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြရန်ပျက်ကွက်နိုင်သောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်အလွန်အောင်မြင်သော၎င်း၏ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများသည်အလွန်ဆင်တူခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည်စျေးကွက်ရှိအခြားအဆင့်မြင့်ဆိပ်ကမ်းများနှင့်ဆင်တူသည်။
သင်ဤ Cubot S168 ကိုဝယ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
ဒီဟာကယူရို ၁၀၀ အောက်၊ အချို့ယူရို ၁၀၀ အောက်တောင်မှ ၀ ယ်နိုင်တဲ့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန် ၇ ခုပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိပ်ကမ်း (၇) ခုအတွက်နေရာချထားသော်လည်း၊ ယနေ့အချိန်၌ယူရို (၁၀၀) အောက်ဖြင့်ရောင်းချသောစမတ်ဖုန်းများစွာရှိသည်ဟုမပြောသင့်ပါ။ တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမြောက်အများကကျွန်တော်တို့ကိုပစ္စည်းကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ကမ်းလှမ်းပြီးကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ကြည့်ကောင်းနေစေတဲ့ဖုန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေကိုတွေ့နိူင်ပါတယ်၊
ယူရို ၁၀၀ အောက်နဲ့ ၀ ယ်ယူနိုင်တဲ့ဒီမိုဘိုင်းပစ္စည်းစာရင်းထဲကအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းကဘာလဲလို့ခင်ဗျားထင်သလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » ယူရို ၁၀၀ အောက်သာဝယ်နိုင်သည့်စမတ်ဖုန်း ၇ လုံး